နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ပေါလစ်ဗျူရိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်နှင့် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး H.E. General Ngo Xuan Lich ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home News Breaking News နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ပေါလစ်ဗျူရိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်နှင့် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး H.E. General Ngo Xuan Lich ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ပေါလစ်ဗျူရိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်နှင့် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး H.E. General Ngo Xuan Lich ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်သည် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ပေါလစ်ဗျူရိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်နှင့် အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး H.E. General Ngo Xuan Lich ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ယနေ့မွန်းလွဲ ၃နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော် ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော် သံတမန်ဆောင်ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု တိုးမြှင့်ဖော်ဆောင်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ဘက်စုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များကို ဆွေးနွေးကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်အတူ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိန်ဝင်း၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ သမ္မတရုံး ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးမင်းသူနှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြပြီး ဧည့်သည် တော် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ပေါလစ် ဗျူရိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်နှင့် အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်အတူ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Dr.Luan Thuy Duong လည်း တက်ရောက်သည်။
နိုငျငံတျောသမ်မတ ဦးထငျကြျော ဗီယကျနမျဆိုရှယျလဈသမ်မတနိုငျငံ ပေါလဈဗြူရိုကျောမတီအဖှဲ့ဝငျနှငျ့ အမြိုးသားကာကှယျရေးဝနျကွီး ဌာန ၀နျကွီး H.E. General Ngo Xuan Lich ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား လကျခံတှဆေုံ့
နိုငျငံတျောသမ်မတ ဦးထငျကြျောသညျ ဗီယကျနမျဆိုရှယျလဈသမ်မတနိုငျငံ ပေါလဈဗြူရိုကျောမတီအဖှဲ့ဝငျနှငျ့ အမြိုးသားကာကှယျရေး ၀နျကွီးဌာန ၀နျကွီး H.E. General Ngo Xuan Lich ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ယနမှေ့နျးလှဲ ၃နာရီခှဲတှငျ နပွေညျတျော ရှိ နိုငျငံတျောသမ်မတအိမျတျော သံတမနျဆောငျဧညျ့ခနျးမ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့စဉျ နှဈနိုငျငံ ခဈြကွညျရငျးနှီးမှု တိုးမွှငျ့ဖျောဆောငျရေး၊ နှဈနိုငျငံ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု မွှငျ့တငျရေး၊ နှဈနိုငျငံအကွား ဘကျစုံ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု မိတျဖကျဆကျဆံရေး ထူထောငျရေးနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံ၌ ရငျးနှီးမွှုပျနှံရေး ဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားကို ဆှေးနှေးကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲသို့ နိုငျငံတျောသမ်မတနှငျ့အတူ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျ၊ ကာကှယျရေး ၀နျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီးစိနျဝငျး၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ဒုတိယ၀နျကွီး ဦးကြျောတငျ၊ သမ်မတရုံး ၀နျကွီးဌာန ဒုတိယ၀နျကွီး ဦးမငျးသူနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားတကျရောကျကွပွီး ဧညျ့သညျ တျော ဗီယကျနမျဆိုရှယျလဈသမ်မတနိုငျငံ ပေါလဈဗြူရိုကျောမတီအဖှဲ့ဝငျနှငျ့ အမြိုးသား ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာန၀နျကွီး ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့နှငျ့အတူ မွနျမာ နိုငျငံဆိုငျရာ ဗီယကျနမျနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E.Dr.Luan Thuy Duong လညျး တကျရောကျသညျ။